तीन महिनाभित्र एनसेलकाे लाभकर उठाउन सर्वोच्चको आदेश: लाभांश र शेयर बिक्रीमा रोक | Makalukhabar.com
तीन महिनाभित्र एनसेलकाे लाभकर उठाउन सर्वोच्चको आदेश: लाभांश र शेयर बिक्रीमा रोक
चैत २६, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले करदातालाई तीन महिनाभित्र एनसेलको सम्पूर्ण लाभकर उठाउन आदेश दिएको छ ।
एनसेल लाभकर सम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले एनसेलको लाभांस वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति दिन समेत रोक लगाएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार एनसेलको सञ्चालक कम्पनी एक्जियटाले अब करिब ४० अर्ब रुपैयाँ कर नतिरेसम्म नाफा लैजान पाउने छैन।
‘एनसेलले मिति २०७३ बैशाख २६ गते र २०७ जेठ २१ मा पुँजीगत लाभकरवापत अग्रिम रुपमा कुल २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क बापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाईसकेकाले कर निर्धारण गरी कर असूल गर्नू’, सवोच्चद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ ।
एनसेलको १२ औं पटकको बिक्रेता टेलियासोनेरा नेपालबाट भागेपछि उसलाई नै लाभकरको दायित्व पन्छाइँदै आइएको थियो ।
बिक्रीबापतको लाभकर उसैले बुझाउने र त्यसको दायित्व आफूमा नभएको जिकिर एनसेल खरिदकर्ता आजियटा र एनसेलको थियो । सर्वोच्चले भने विपक्षी एक्जिएटालाई नेपालको कानून नचिनेको अवस्थामा एनसेललाई आफ्नो अंश–भाग बनाई नियन्त्रण गर्ने कुनैपनि कानून अधिकार नभएको भन्दै एक्जिएटालाई व्यापार, व्यवस्थापन, आर्थिक लाभ र क्रियाकलापमा संलग्न नर्गन पनि आदेश दिएको छ ।
एनसेलबारे सर्वोच्च फैसलाको पूर्णपाठ:
बिराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलले यसरी गर्यो माहुलीको टाउकाको सफल अप्रेशन
अछाममा ट्याक्टर दुर्घटना : तीनको मृत्युु, ४ जना घाइते
अछाम, ११ असार । चौरपाटी गाउँपालिका–२ मुलिगाउँमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्युु भएको छ । भने, ४ जना घाइते भएका छन् । से १ त १८३९ को बालुवा ल्याउन सेती नदीतिर गइरहेको रित्तो ट्याक्टर बुधबार बिहान पौने ७ बजेतिर दुर्घटना भएको हो । मृतकहरुको सनाखत भएको छैन । ट्याक्टरमा विद्यार्थीहरु च... जारी राख्नुहोस...
काठमाडौं, ११ असार ।आज बुधवार कुवेती दिनार बाहेक सबै देशको मुल्य ओरालो लागेको छ । आज अमेरीकी डलर एकको खरिददर ११० रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर १११ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ । साउदी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर २९ रुपैयाँ ६६ पैसा रहेको छ । कतारी रियाल एकको खरिददर ३०... जारी राख्नुहोस...
आज एसईईको नतिजा सार्वजनिक हुँदै
भक्तपुर, ११ असार । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसईईको नतिजा बुधबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । वि सं २०७५ चैत १० गतेदेखि सञ्चालन गरिएको एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले बुधबार परीक्षा सा... जारी राख्नुहोस...
चट्याङले लागेर तीन जना बालकको मृत्यु, एक गम्भीर घाइते
दाङ, ११ असार । दाङको राप्ती गाउँपालिकामा चट्याङले लागेर तीन जना बालकको मृत्यु भएको छ । भने, एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् । दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मौरीघाटका १२ वर्षीय साजन चौधरी, १३ वर्षीय विवेक चौधरी र १० वर्षीय रमित चौधरीको चट्याङ लागेर मृत्यु भएको हो । त्यस्तै, त्यसै ठाउँका अविनाश... जारी राख्नुहोस...
भरतपुर महानगरद्वारा गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाका लागि ६ करोड बढी विनियाेजन
असार १०, चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनको पहलमा निर्माण हुन लागेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका लागि ६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ । महानगरको तर्फबाट चार करोड र प्रत्येक वडाबाट पाँच/पाँच लाख गरी ६ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो । यसअघि... जारी राख्नुहोस...
वडा कपको उपाधी स्वारा क्लबलाई
असार १०, धरान । धरान २० बिष्णुपादुका खेलकुद बिकास समितीको आयोजनामा सोमबार सम्पन्नप्रथम वडा अध्यक्ष कपमा स्वारा फुटबल क्लबले बिजयी हात पारेको छ । गत असार ३ गते देखी सुरु भई ९ गते सम्म पोखरी फुटवल खेल मैदान धरान २० बिष्णुपादुकामा भएको खेलमा भालढुगा फुटबल क्लबलाई ० का बिरुद्ध ३ गोल अन्तरले हराउँदै उपा... जारी राख्नुहोस...
‘क्लिन फिड अव्यवहारिक छ, लागु भए व्यवसाय बन्द गर्छौं’
असार,१० काठमाडौँ । सरोकारवालाहरुले सरकारले हचुवाको भरमा क्लिन फिड लागु गर्न लागेको भन्दै उक्त विद्येयक कार्यान्वयनमा ल्याए नेपालमा केवल व्यवसाय नै धरासयी हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपालका केवल टिभी सेवा प्रदायकहरुले सामूहिक रुपमा यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले... जारी राख्नुहोस...
काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट साढे १५ अर्ब, प्राथमिकतामा के छ ?
असार १०, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ का लागि साढे १५ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ । मंगलबार काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले नगरसभामा १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन् । महानगरपालिकाले शिक्षा, पर्यटन, संम्... जारी राख्नुहोस...
एन आई सीका ग्राहकलागि खुशीकाे खबर, सी.पी. हस्पिटलमा उपचार गर्दा २०% छुट
असार १०, काठमाडाैँ । एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेड र सी.पी. हस्पिटल, प्रा.लि. धनगढी, चटकपुरबीच हस्पिटलमा उपचार गराउँदा विभिन्न सेवा सुविधाहरुमा छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । यस बैंक र सी.पी. हस्पिटल, प्रा.लि. धनगढी, चटकपुरबीच बैंकका कर्मचारी, बैंकका डेबिट एवं क्रेडिट कार्डवाहक तथा बैंकका सम्पूर्ण... जारी राख्नुहोस...
'विप्लव शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने संकेत पाएको छु'
असार १०, भरतपुर । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विप्लव नेतृत्वको नेकपा ढिलो चाँडो (शान्तिपूर्ण) मूलधारको राजनीतिमा आउने दाबी गरेका छन् । मंगलबार भरतपुर महानगरपालिकाको चौँथो नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले सो कुरा बताएका हुन् ।... जारी राख्नुहोस...